९५ प्रतिशतलाई दाँत माझ्नै आउदैन - Health Today Nepal
९५ प्रतिशतलाई दाँत माझ्नै आउदैन
November 29th, 2017 बिशेषज्ञ लेख0comments
डा. रीता सिह
धेरै मानिसको सास गन्हाउने समस्या हुन्छ । तर यो समस्या आफूलाई थाहा हुँदैन । नजिकका साथी वा परिवारका सदस्यले भनिदिएमात्र उसले आफ्नो समस्या थाहा पाउँछ । पेट खराब भएर वा खानपान नमिलेर सास गन्हाएको होला भनेर कतिपयले यसलाई वास्ता गरेको पाइँदैन । तर ९० प्रतिशत सास गन्हाउनुको प्रमुख कारण गिजा तथा दाँतमा समस्या भएर हो । धेरैजसो गिजामा समस्या देखिएपछि सास गन्हाउँछ । गिजा दाँतको पृष्ठभूमि हो । गिजा कमजोर भएपछि दाँत लामो समयसम्म मजबुद रहन सक्दैन । गिजाकै बलमा दाँत टिकेको हुन्छ । हरेक व्यक्तिको प्राकृतिक दाँत बलियो हुन्छ । त्यसमा मानिसको सुन्दरता लुकेको हुन्छ । त्यसैले सकभर प्राकृतिक दाँतलाई गुमाउनु हँुदैन । तर विविध कारणले गुमिहाले पनि धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन ।
अहिले कृत्रिम दाँत प्रत्यारोपण गर्न सकिने सुविधा स्वदेशमै छ । तर एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी के छ भने कृत्रिम दाँत प्रत्यारोपण गर्नका लागि पनि गिजा स्वस्थ्य हुनु आवश्यक छ । त्यसैले हामीले मुख स्वास्थ्यका लागि दाँतमात्र सेतो बनाएर पुग्दैन । गिजा पनि स्वस्थ्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । विभिन्न कारणले गिजामा समस्या देखिन्छ । दाँत नमाझ्ने वा माझे पनि सही तरिकाले नमाझ्दा, जङफुड बढी खाने गर्दा, खाएपछि कुल्ला नगर्दा, धूमपान, मद्यपान गर्ने बानीलगायतका कारणले गिजाको समस्या बढी देखिने गरेको छ । गिजा हामी सीधै आँखाले देख्न सक्दैनौं । यो मुखभित्र हुन्छ । त्यसैले यसमा हुने समस्या पनि हामी थाहा पाउदैनौं । एकदमै दुखेपछि वा दाँतबाट रगत नै आउन थालेपछि हामी डेन्टिस्टकहाँ जान्छौं । गिजाको समस्या पहिलो स्टेजमा छ भने यसलाई बचाउन सकिन्छ तर अन्तिम स्टेजमा पुगिसकेर पिप नै आउन थालेको छ भने यसले ठूलो समस्या पैदा गर्छ । सास गन्हायो भने गिजामा समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
यसका साथै ब्रस गर्दा अलिअलि रगत आयो भने पनि गिजामा समस्या देखिन थाल्यो भनेर सम्झनुपर्छ । दाँतको बीचमा ग्याप बढ्न थाल्यो भने पनि हामी गिजामा केही समस्या छ कि भनेर सम्झनुपर्छ । गिजा हल्का रातो हुँदैछ भने पनि ख्याल गर्नुपर्छ । यसो गर्दा गिजा बचाउन पनि सकिन्छ । दाँत माझ्ने सही तरिका बच्चादेखि सबै सदस्यलाई सिकाउनु आवश्यक छ । कुन पेस्ट प्रयोग गर्छौं ? कस्तो ब्रस प्रयोग गर्छौं ? भन्दा पनि कसरी माझ्छांै त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रो देशमा ९५ प्रतिशतले दाँत माझेको मिलेको हँुदैन । पछिल्ला दिनमा जङफुडका कारण धेरैको दाँत बिग्रिरहेका छन् । आमाहरूले बच्चाले ब्रस समात्न सिकेपछि दाँत माझ्न छोडिदिन्छन । तर त्यसो होइन । बच्चाबच्ची सात, आठ वर्षको नभएसम्म आमाले आफैं बच्चाको दाँत माझ्नमा सहयोग गरिदिनु पर्छ । दुख्ने समयमा मात्र उपचारका लागि बच्चा डेन्टिस्टका ल्याउँदा बच्चा डाक्टरकहाँ आउन डराउछन् । त्यसैले कम्तीमा पनि समयसमयमा दाँतको चेकअफका लागि ल्याइरहनु पर्छ । अर्को कुरा गर्भवती भएका बेला हर्मोनको कमीले दाँत र गिजामा समस्या आउँछ । त्यसैले गर्भवतीको योजना बनाउनुभन्दा पहिले नै दाँत र गिजा जाँच गराउनुपर्छ ।
सामान्यतया तीन महिनामा ब्रस चेन्ज गर्नुपर्छ । दिनमा दुई पटक दाँत माझ्नुपर्छ । गिजाको समस्या बढिसकेपछि त्यसको उपचार गाह्रो छ । गिजा भएन भने एकातिर प्राकृतिक दाँत रहँदैन भने अर्कोतिर कृति म दाँत राख्न पनि मिल्दैन । किनकि प्रत्यारोपण गर्ने ठाउँ नै स्वस्थ नभए चाहेर पनि नयाँ दाँत राख्न सकिँदैन । दाँत चम्काएरमात्र हुँदैन । पृष्ठभूमि वा जग स्वस्थ्य हुनु आवश्यक छ । जसरी जग नभएको घर जतिसुकै राम्रो बनाए पनि सानोतिनो हुरीबतासले समेत ढल्न सक्छ ठीक त्यसैगरी गिजा स्वस्थ्य नभएको दाँत रहन सक्दैन । डा.सिंह नेप्लिज सोसाइटी अफ पेरिओडेन्टोलोजी एन्ड ओरल इम्प्लान्टोलोजीकी अध्यक्ष हुन । )
Previous article कसरी लाग्छ रगतसम्बन्धी रोग
Next article महिनावारीमा यौनसम्पर्क कति जायज ?